Nanomboka tamin'ny boky portfolio izay novolavolainay sy natao pirinty tamin'ny tsanganana kely Teny notsongaina (fitaovana iray hafa lehibe). Tianay ny traikefa feno boky - ny lanjany eo am-pelatananao, ny pejy matte malama, ary ny fizahana amin'ny fotoana fialan-tsasatrao. Rehefa nanomboka nanao pirinty, nizara ary nanoratra ireo boky ireo izahay manerana ny firenena, dia fantatray fa mila fomba hafa hizarana ny atiny izahay. Voafetra ny paikadim-pirinty madio, na amin'ny vidiny, amin'ny fanamorana ny fanavaozana, na amin'ny fotoana fanaterana. Izahay dia nitady fomba hanaterana ny zavatra niainan'ny boky iray, rehefa notakiana.